Ixabiso eliphantsi lokuSebenza ngokuBini eliQhelekileyo le-Chain ye-Fertilizer ye-Crusher Machine kunye ne-Factory | YiZheng
Double-asi Chain isityumzi Machine Isichumisi Isityumzi sisixhobo sokutyumza ngobuchwephesha somthamo omkhulu wezinto ezisetyenzisiweyo, sisetyenziswa ngokubanzi kumgquba we-bio-organic, umgquba oqinileyo wenkunkuma kamasipala, inkunkuma yasemaphandleni, inkunkuma yezemizi-mveliso, imfuyo kunye nomgquba weenkukhu kunye nezinye izinto zenkqubo yokuvundisa.
Yintoni i-axle Double Chain isichumiso isityumzi Machine?
Inkqubo ye- Double-asi Chain isityumzi Machine Isichumisi Isityumzi Ayisetyenziselwa kuphela ukutyumza amaqhuma emveliso yezichumiso eziphilayo, kodwa ikwasetyenziswa ngokubanzi kwimichiza, izinto zokwakha, ezemigodi kunye namanye amashishini, kusetyenziswa uxinzelelo oluphezulu lweMoCar bide chain.
Izinto eziphambili ze-crusher chain kubandakanya ityathanga lesinyithi, ukuphela kwetyathanga kunye ne-rotor edityaniswe kwelinye icala lesixokelelwano kukhuselekile kwentloko yokunxiba eyenziwe ngentsimbi. Chain isityumzi bobabo isityumzi ifuthe, ngesantya esiphezulu ukujikeleza ikhonkco gob nefuthe pulverized.
Uluhlu lwe-28 ~ 78m / s. Ukuthintela ukunamathela kwinto yokuxubana komzimba wentsimbi, umzimba ugcwele ipleyiti yerabha, kukho umnyango wokuvula ngokukhawuleza emzimbeni, iactuator inyuswe kwisiseko esenziwe ngentsimbi ukuqinisekisa ukusebenza okuzinzileyo.
Ukusetyenziswa Double-asi Chain isichumiso isityumzi Machine
1. Inkunkuma yezoLimo: iindiza, izidlo zekotoni, iintsalela zamakhowa, iintsalela zegesi-njl.
2. Inkunkuma kwimizi-mveliso: intsalela yeviniga, intsalela yeswekile, iilesi njl.
3. Umgquba wezilwanyana okanye udaka: umgquba weenkuku, umgquba weenkomo, umgquba wehashe, udaka lwedreyini, udaka lomlambo njl.
4. Inkunkuma yasekhaya: inkunkuma yasekhitshini, inkunkuma yokutya, inkunkuma yokutyela njl.
5. Inkqubo ye Double-asi Chain isityumzi Machine Isichumisi Isityumzi ilungele ukutyunyuzwa kwezinto ngaphambi nasemva kokudityaniswa kwezichumisi ezimbaxa, okanye ukuqhubekeka okukhulu kwevolumu yokuqhekezwa kwezinto eziluhlaza.
Iimpawu Double-asi asi Umanyolo isityumzi Machine
(1) Izinto ezityumkileyo zifana kwaye zilungile.
(2) Simple kunye nesakhiwo efanelekileyo kwaye kulula ukuba ukucoca.
(3) izinga High eyaphukileyo, okonga umbane.
(4) Abancinci abachaphazelekayo kumxholo wokufuma,
(5) Ingxolo yomsebenzi engaphantsi kwee-decibel ezingama-75 (db), ungcoliseko lothuli oluncinci.
(6) Kufanelekile ukuba kutyunyuzwe izinto eziphakathi ezinzima kunye nezinzima.
Double-asi Chain isichumiso isityumzi Machine Video Display
Ukukhethwa kwesixokelelwano soMatshini oMatshini oMbane oMbane oMbane
I-15 × 2
I-22 × 2
Egqithileyo Amabini-Stage isichumiso isityumzi Machine
Okulandelayo: Isichumiso Urea Isityumzi Machine
Intshayelelo Yintoni umatshini oxutywe nesichumiso se-Shaft? Umatshini weSixube soMxube weShaft esiphindwe kabini sisixhobo sokuxuba esisebenza kakuhle, kokukhona ixesha elide itanki ephambili ingcono isiphumo sokuxuba. Izinto eziphambili ezingafunekiyo kunye nezinye izinto ezincedisayo zondliwa kwizixhobo ngaxeshanye kwaye zixutywe ngokufanayo, emva koko zithunyelwa yi-b ...
Intshayelelo Yintoni uMatshini wokuDibanisa isicatshulwa sediski? Umatshini wokuDibanisa isicatshulwa seDiski uxubusha izinto zokwenza izinto, ezibandakanya idiski yokuxuba, ingalo yokuxuba, ifreyimu, ibhokisi yebhokisi yebhokisi kunye nendlela yokuhambisa. Iimpawu zayo kukuba kukho isilinda esilungiswe embindini wediski yokuxuba, isiciko sesilinda sicwangcisiwe ...
Intshayelelo Yintoni isahluli sokuLunga esiTyekileyo esiSahluli-lulwelo? Isixhobo sokhuselo lokusingqongileyo ukulungiselela ukungcoliswa kwamanzi emzimbeni weenkukhu. Iyakwazi ukwahlula ilindle eluhlaza kunye nelindle kunkunkuma yemfuyo iye kwisichumiso esingamanzi kunye nesichumiso esiqinileyo. Isichumisi esingamanzi singasetyenziselwa isityalo ...
Intshayelelo Yintoni uMatshini oShukumayo oShukumayo wokuHlola? Iscreen sokuShukuma kwescreen (Iscreen seNgcaciso yeScreen) sisebenzisa ukungcangcazela kwemoto njengomthombo wokungcangcazela ukwenza izinto zishukume kwiscreen kwaye siqhubele phambili kumgca othe tye. Izinto zingena ukondla izibuko kumatshini zovavanyo ngokulinganayo ukusuka fe ...